China Cable nekudodobalisa umlilo ukutyabeka mveliso kunye nabenzi | Weicheng
Igama lemveliso Ukutsalwa kwentambo engacimiyo
Ukucaciswa Model 25kg / umphanda
Ububanzi besicelo Isetyenziswa ngokubanzi kunyango lwe-inwires kunye neentambo ezisebenza kwilangatye kwizityalo zamandla, kwimizi-mveliso kunye
imigodi, ezonxibelelwano kunye nezakhiwo zasekuhlaleni;
Ingasetyenziselwa ukukhusela umlilo ngomthi
izakhiwo, izakhiwo zensimbi, kunye nokutsha
Imigca ephantsi yobunjineli bomhlaba.
Izinto eziluncedo Product 1. Ifilimu engacacanga kunye nokumelana nomlilo ngokugqwesileyo 2. Ukwakhiwa okulula, ukuxubha, ukutshiza, njl.
3. Ukumelana kakuhle nomlilo kunye nokuxhathisa kwamanzi
4. Kwakhiwa umaleko wesiponji ofanayo kunye noxineneyo emva komlilo,
enomlilo obalulekileyo kunye nefuthe lokugquma ubushushu
I-CDDT-AA yohlobo lwe-cable retardant coating yoluhlobo olutsha lokudibanisa umlilo oluveliswe yinkampani yethu ngokwemigangatho ye-GA181-1998 yoMphathiswa Wezokhuseleko loluntu. Imveliso yenziwe ngazo zonke iintlobo ze-fire-retardant, i-plasticizer njalo njalo. Yintambo ehamba phambili yamanzi nombane elizweni.
Le mveliso isetyenziselwa unyango lokucima umlilo kwiingcingo kunye neentambo kwizityalo zamandla, imigodi, unxibelelwano ngocingo kunye nezakhiwo zasekuhlaleni. Ingasetyenziselwa ukukhusela umlilo ngezinto ezinokutsha zesakhiwo somthi, izakhiwo zesinyithi kunye nobunjineli obuphantsi komhlaba.
Phambi kolwakhiwo lwepeyinti yokulinda umlilo, intambo edadayo, ibala leoyile kunye neesundries kumphezulu wentambo ziya kucocwa kwaye ziconjululwe, kwaye ulwakhiwo lothango lokugcina umlilo lunokwenziwa emva kokuba umphezulu womile.
Isambatho sokulibazisa umlilo ngekhebula siya kutshizwa kwaye senziwe ibrashi, kwaye siya kuxutywa ngokupheleleyo kwaye sisetyenziswe ngokulinganayo. Xa isambatho sinyinyithekile, sinokuhlanjululwa ngesixa esifanelekileyo samanzi ompompo ukulungiselela ukutshiza.
Ukutyabeka okungcolileyo okungangeni manzi kunye nokuchasana kufuneka kukhuselwe ngexesha nangaphambi kokwakha.
Ngeengcingo kunye neentambo ezineplastiki kunye nerabha yesikhumba, ubukhulu bokutyabeka bungu-0.5-1 mm, kwaye isixa sokuthambisa simalunga ne-1.5 kg / m, kwintambo egqunyiweyo epakishwe ngephepha leoyile, umaleko wengubo yeglasi uya kusongwa kuqala , kwaye ke ukutyabeka kuya kusetyenziswa. Ukuba ulwakhiwo lwenziwa ngaphandle okanye kwimeko yokufuma, kuya kudityaniswa ivanishi ehambelanayo.
Intambo yokubasa umlilo iya kupakishwa ngesinyithi okanye kwimigqomo yeplastiki.
Intambo yokubamba umlilo egcina intambo kufuneka igcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo kunye nomoya.
Xa uhambisa imveliso kufuneka ikhuselwe elangeni.
Ixesha elifanelekileyo lokugcina ikhebula lokulibala umlilo ngokukhawuleza lonyaka omnye.
Egqithileyo Elastic itywina engangenwa
Okulandelayo: Ilaphu elingenamlilo kunye neTape yeSilicone